[Ankapobeny ] 08 Janoary, 2010 13:53
Anarany mba vaovao ny taona fa ny toe-tsaina dia nikiroso fahana tena very tanteraka @ katesizy ozy ny olona izay. Voalohany aloa de feno soratra ny rindrina manao oe "tgv=0=Foza orana" na oe "Mialà ny Fat" sy ny "tgvendrana" na koa ny oe "andrytgv=sokina" de feno ny rindrina manamorona any arabe sy ny tamboho sy ny fefy rehetra eto @ tanàna.
Faharoa manarak'izay dia tapahana ny lalàna ary lasan'ny mpivarotra ny tanàna iny @ petite vitesse rehetra iny manodidina an'i behoririka ary mbola mahazo mivarotra amoron-dalana ihany koa hono izay mbola te hivarotra rehetra ozy ny tenin'ny fat??? omena asa mivarotra izay misôma.Tao aorinan'ny agoa tapaka moa de efa mikatona ny zone sasany ary hikano koa ny hafa. Vokany miady ny mpivarotra ara-dalàna sy ny ny mpivarotra amoron-dalàna. Atahorana ny ady ny samy sivily ao aorina ao.
Fahatelo dia ampadoavina vola 50Ariary ny siô iray ho an'ireo mpatsaka @ paompy de hifamalina eo ny fandoavana azy de korontana sy savorovoro ny tohiny avy eo.
Fehiny tsy mbola milamina velively ny tanana fa vao maika ary mikorontana ambony ambany.